/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / 10 (110417-88-4) Dolastatin.
SKU: 110417-88-4. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Dolastatin 10 (CAS 110417-88-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Dọkụl 10 Dolastatin
I.Danostatin 10 isi agwa:
aha: Dolastatin 10
Molekụla Formula: C42H68N6O6S
Ọbara arọ: 785.09G / mol
Nchekwa Nche: Na-echekwa na ebe dị jụụ na akọrọ na 0 - 4 ℃ maka obere oge (ụbọchị ka izu) ma ọ bụ -57 ℃ maka ogologo oge (ọnwa ruo afọ)
agba: White na-acha ọcha ọcha
II. Diana 10 (110417-88-4) Dolastatin iji mee ihe na antitumor cycle
2.Dolastatin 10 eji:
Nzube: Ọkà mmụta sayensị sayensị nyochachara nrụpụta ọrụ na ọgwụ na-egbu egbu nke omekorita microtubule dị iche iche na-eme dolastatin-10 na ndị ọrịa na-arịa ọrịa ara.
Ụzọ: Ndị ọrịa iri abụọ na otu na-arịa ọrịa cancer metastatic nwere ọgwụgwọ na-eme dolastatin-10 na ọgwụ 400 mcg / m2 site na bolus na-abanye n'ime oge ọ bụla na 3 izu.
Nsonaazụ: Otu n'ime ndị ọrịa 21 (5%; 95% CI: 0-24%) rụpụtara remission maka oge 113. Ndị ọrịa anọ nọ na-enwe ọrịa na-ebute ọrịa maka oge nke 87 ụbọchị. Ndị ọrịa natara nkeji abụọ nke dolastatin-10. Ọrịa hematologic dị njọ, na ọrịa 8 na-emepụta 4 neutropenia, na 5 na 3 neutropenia; a hụrụ 3 febrile neutropenia. Usoro nhazi nke 3 na 4 neutropenia enwere na 36% nke usoro ihe omume. Ọrịa na-adịghị na hematologic bụ ihe a na-adịghị ahụkebe.
Nchikota: Ọ bụ ezie na a nabatara proactive toxicity of the dolastatin-10, o nwere ntakịrị ihe n'ime nchọpụta ọrịa cancer ara ọganihu a.
Na Vitro: Dolastatin 10 bụ pentapeptide pụrụ iche nke dịpụrụ adịpụ na Dolabella auricularia. A chọpụtara na data ndị a na vitio na-adị nnọọ ka nke Dolastatin 10 na PEA Auristatin, nke ọ bụla nwere ihe GI50 nke 10-5-10-6 μg / mL (10-2-10-3 nM) megide otu minipanel nke mkpụrụ ndụ mmadụ. Njikọ ọgwụ na-emegide ọgwụ (ADC) gụnyere antibody CD30 monoclonal cAC10 conjugated to the agent cytotoxic agent monomethyl auristatin E (MMAE), otu analogic synthetic nke tubing polymerization inhibitor Dolastatin 10 (110417-88-4).
3.Warning na Dolastatin 10
Ngwaahịa a bụ maka nyocha, ọ bụghị maka mmadụ ma ọ bụ ọgwụ ogwu.
Maka inweta elu solubility, biko kpoo ọkụ na 37 ℃ na ikwanye ya na ultrasonic bat maka a while.Stock ngwọta nwere ike ịchekwa n'okpuru -20 ℃ maka ọtụtụ ọnwa.
Ngwunye 10 Dolastatin
Ejiri usoro 10 (110417-88-4) Dolastatin zuru ezu site n'inwe mmepụta nke ọma nke abuo amino acid isi, Dil (6) na Dap (11), na njikọta ụkwụ nke ise amino acid site na C-terminal Doe .
Njikọ na Nyocha nke Dolanatin 10 Analogues nwere Heteroatoms na Amino Acid Side Chains.
Ihe ntụgharị uche na-atụgharị uche nke ihe ndị na-eme bụ 10 dolastatin na-enwe mmasị dị ukwuu na ọrịa kansa n'ihi ọrụ ike ha dị n'ime vitro na ojiji ha dị ka ndị a na-ebute na ọgwụ mgbaba (ADCs). Mgbanwe nke scaffold 10 a na-eme doodine emetụtala ọtụtụ mgbanwe nke P1, N-terminus, na P5, C-terminus, na-elebara anya na P2.
Na nyocha nke cellular, Dolastatin 10 (110417-88-4) na-egosi ọrụ megide ụfọdụ arịa ọrịa leukemia mmadụ, lymphoma na mkpụrụ ndụ tumo siri ike (dịka OVCAR-3 na NSCLC) na IC50 si na 0.1nM gaa na 10nM. A na-anwale ya ugbu a n'ule ahụ.
III. 10 (110417-88-4) HCML Dolastatin
IV. Esi zụta Dolastatin 10 si AASraw?